April 25, 2017 अम्बिका अन्तरबार्ता
एक दशक लामो पत्रकारीता मार्फत समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका मोरङ केराबारी १ का किशन शाही चिरपरिचित छन् ।
१० बर्षदेखि पत्रकारीतामा क्रियाशिल उनी तत्कालिन नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष समेत थिए । पार्टी एकिकरणपछि एकता प्रकृयामा आएका उनी प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङको सचिव र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर १ को पार्षद पनि छन् । पत्रकारीतासंगै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध शाही केराबारी व्यापार प्रबन्ध समितिको महासचिव समेत हुन् । आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनमा केराबारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका शाहीसंग गरिएको कुराकानी
तपाई त पत्रकार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्धारी दिने सोच कसरी आयो ?
मैले यो ठाँउमा वसेर एक दशक वढी पत्रकारीता गरिरहदा यहा धेरै विकृति विसंगति प्रति कलम चलाएको छु समाज परिवर्तनका धेरै मुद्धा उठाएको छु । समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न धेरै कार्य गरेजस्तो लाग्छ । त्यो मैले भन्ने भन्दा पनि यहाका नागरिकले वुझेका छन् ।
हामीले त कलमको माध्यमवाट झक्झकाउने मात्र हो सामाजिक नैतिक तथा दवाव दिनेमात्र हो । अनि नाजायज काम विरुद्ध कलम चलाउदै सूचना सम्वाहकको रुपमा कलम मार्फत खवरदारी गर्ने मात्र हो । यो समाजलाई सही मार्गमा हिडाउन खोज्ने सचेत नागरीकको आवाजको समेत सुनुवाई हुदैन । आफूले गरै सवै ठिक अरुले गरे सवै वेठिक भन्ने प्रबृतिले गर्दा जनताको कुनै कुरा सुनवाई हुदैन । यहाँ अझै पनि ताना शाह प्रवृति हावी छ । यसैले यो राजनीतिक संस्कार विकृतिलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ पनि उमेद्धारी दिएको हुँ ।
राजनीतिक दलहरुमा उमेद्धारीमा लुछाचुडि भइरहेको सुनिन्छ । तपाईले कसरी सजिलै वडाध्यक्षको टिकट पाउनुभयो ?
उम्मेद्धारीको विषयलाई लिएर कतिपय दलमा भाँडभैलो मात्र भएन, कार्यकर्ता रिझाउँन कतिपय दललाई फलामको चिउरा चपाउँन सरह भयो । केही पार्टीले त श्रीमानले टिकट नपाएपछि श्रीमतिलाई टिकट दिएर पनि कार्यकर्ता थुमथुमाएको पाइयो । तर हाम्रो पाटीमा उमेद्धारको विषयमा कहिल्यै लुछाचुडी भएन लोकतान्त्रिक र विधि सम्बत वलिया र जनतासंग भिज्न र आफनो र अर्काको पार्टी नछुटाई काम गर्न सक्ने उमेद्धारलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उमेद्धारी चयन गरियो । एकमतका साथमा सवैवाट निर्विरोध सर्मथन पाएपछि मैले उमेद्धारी दिने निर्णय गरेको हँु ।
केराबारी गाउँपालिकामा तपाइको उमेद्धारी किन ?
केराबारी क्षेत्रफलको आधारमा सवैभन्दा ठूलो गाउपालिका हो । केराबारी गाउँपालिकाको मुटुको रुपमा रहेको १० नम्बर वडा हरेक हिसावले महत्वपूर्ण छ । झण्डै १७ सय मतदाता रहेको यो वार्ड व्यापारीक क्षेत्र हो । सिंगो गाउपालिकाको अस्तित्व र आर्कषण बोक्ने यो बजारलाई हरेक हिसावले व्यवस्थित गर्न छ । साँघुरो टुक्रे टाक्रे योजना वनाउने वजेट सक्ने नीतिले मात्र विकासले फडको मार्न सक्दैन ।
एउटा भिजन र मिसन बोकेर अघि वढेमात्र त्यो पुरा हुन्छ । सपना वीनाको परिकल्पना कहिल्यै पुरा हुन सक्दैन । यसका लागि योजनावद्ध विकास गर्नका लागि मास्टर प्लान बनाउँन जरुरी छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प प्रमृ‘ख कुरा हो । दुरदृष्टि चाहिन्छ । आफ्नो ठाँउ स’न्दर बनाउँन कालान्तरसम्म टिक्ने दिर्घकालीन योजनाहरु आवश्यक छ । जनसहभागिता विना गरिएको विकासले सार्थकता पाउन सक्दैन सवै जनतालाई साथमा लिएर कसैलाई पक्षपात पूर्ण व्यवहार नगरी अघि वढ्नु नै मेरो पहिलो जिम्बेवारी हुनेछ । यहाँ आफनो दलले गरेको नराम्रा काम पनि राम्रा मान्ने अनि आफुले गरेको मात्रै राम्रो ठान्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कारले गर्दा नै केराबारी पछि परेको हो ।
वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभयो भने प्राथमिकताका विषयहरु के के हुनेछन् ?
सर्वप्रथम त विकासमा चासो र चिन्तन गर्ने सवै वडावासीहरुलाई बोलाएर भेला गराउँछु । १ वर्ष भित्र के गर्न सकिन्छ ,२ वर्षमा के गर्ने ? वार्षिक योजना तयार बनाएर गुरु योजनाको गृहकार्य गर्छु । सोहि गुरुयोजना मुताविक कृषि,पर्यटन,शिक्षा,स्वास्थ्य,शुद्ध खानेपानि,बजार तथा शहरी वस्ती विकास सूचना संञ्चार प्रविधि व्यवस्थापन , मोटरवाटो लगायत मानविय श्रोत परिचालनका लागि जनजीविकाको सवालमा योजना बनाउछु । त्यसलाई क्रमस प्राथमिकिकरणको आधारमा कार्यान्वयन गरी यो वडालाई स्मार्ट वडा अर्थात व्यवस्थित नमूना वस्ति विकास गरि वडालाई सफा र सुन्दर बनाउँन सकिन्छ भन्ने काम गरेर देखाउने सोचका साथ अघि वढेको छु ।
थापाटार आँपटार जस्ता ठाउमा रहेका दलित वस्तीलाई नमूना दलित वस्ती विकासको रुपमा अघि वढाउँने छु । कृषकहरुका लािग विउ मल र वजारको व्यवस्था गर्न कृषि सहकारी तथा कृषि वजार स्थापना गरी व्यावसायिक पशुपालन तथा कृषिक्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै लोपोन्मुख भेडा र चौरी पालन तथा जडिवुटी उत्पादन,प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्नेछु । केराबारी वजार क्षेत्रमा रहका वाटोहरुलाई मापदण्ड अनुसार पुरा गराई ढल तथा नाली व्यवस्थापन गरी एक घर एक विरुवाको अवधारणा लिई हरित केराबारी वनाउन रहका वाटोहरुलार्य मापदण्ड अनुसार पुरा गराई ढल तथा नाली व्यवस्थापन गरी एक घर एक विरुवाको अवधारणा लिई हरित केराबारी वनाउन प्रयास गर्ने छु । वजार क्षेत्रम रहेका अव्यवस्थित पार्किङ र यातायातलाई सहज आवतजावत गर्न हाल भइरहेको वसपार्कलाई व्यवस्थापन गरी व्यवस्थित गर्नेछु । केराबारी १० को बजार क्षेत्र मूख्य चोक, टोलहरुमा सौर्यवत्ति जडान गरी उज्यालो केराबारी चम्किरहोस सधैभरी जस्ता योजना कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु । वजार क्षेत्रमा स्मार्ट आधुनिक शौचालय निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नेछु ।
तपाइले चाहेको स्मार्ड वार्ड या नमूना गाउपालिका सम्भव छ ?
विगतमा नेताले त्यो गरेन । यो गरेन भनेर गाली गर्ने तपाई हामी यो पालीको चुनाववाट कस्ता व्यतिmलाई जिताउछौं त्यसले नै आगामी केराबारीको भाग्य र भविश्य निर्भर रहन्छ । यतिवेला धेरैले आफूलाई योग्य उमेद्धारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेता असल योग्य क्षमतावान भए भने विकास वा उन्नति हुन्छ र नेता कमजोर स्वार्थी कमसल भए विकासको नाममा विनास हुन्छ ।
आर्थिक श्रोत राम्रो भएको संस्थामा काम गर्न तछाड मछाड गर्ने यहा सम्म की चुनाव गरी गरी समिति गठन गर्ने अनि आयश्रोत नभएको संस्था तथा क्षेत्रमा वास्तै नगर्ने परिपाटीले हामीलाई राम्रो पाठ सिकाएको छ । हिजो आफनो स्वार्थका लागि रातदिन खट्ने व्यतिmहरु आज एकैदिन समाजसेवी बनेर पनि आएका छन् । त्यसता व्यतिmले यो समाजको विकास भन्दा पनि आफनो विकास चाहन्छन् भन्ने कुरा जनतालाई जगजाहेर छ ।
त्यसैले यहा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । मात्र दृढ इच्छा शतिm हुनुपर्छ र्। हामी र हाम्रो भावनाको विकास गराउदै सवै नागरीकलाई विकासनिर्माणमा अपनत्व महशुस गराउनुपर्छ । गर्न सकिन्छ । श्रोत र साधन धेरै हुदैमा विकास हुन्छ नै भन्ने हुदैन तर नेता असल क्षमतावान र स्वप्नदर्सी हुनुपर्छ । नेतामा पैसाप्रतिको मोह भन्दा समाजको सेवाभावनाले अभिप्रेरित हुनुपर्छ ।
नेता भएपछि सवैले मान सम्मान गर्छन् । हरेक ठाँउमा अवसर पाइन्छ । आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । आफन्तलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । ठाउ ठाउमा आसन ग्रहण गर्न र भासन ग्रहण पाइन्छ भनेर नेता बन्ने होडमा रहेका मानिसले समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्दैन । – संयन्त्र साप्ताहिक